Huawei yakaratidza yayo nyowani Linux yekuparura openEuler, yakavakirwa paCentOS | Linux Vakapindwa muropa
Huawei yakaratidza yayo nyowani Linux kugovera openEuler, zvichibva paCentOS
Mazuva mashoma apfuura Huawei yakafukurwa kuburikidza neshambadziro kupedzwa kwezvivakwa zve kuvandudzwa kwekuparadzirwa kweLinux kutsva kunodaidzwa "OpenEuler", iyo ichagadziriswa nekutora chikamu kwenharaunda.
Kune avo vasingazive nezve basa raHuawei paLinux, iwe unofanirwa kuziva kuti lKambani yeChinese inogadzira kugovera Linux yakadaidzwa "EulerOS" iyo yakavakirwa paCentOS uye iri inoitirwa kushandiswa kwekutengesa yebhizimusi kunyorera. openEuler ndiyo yemahara vhezheni ye "EulerOS" uye mukuzivisa kweHuawei kwakazivisa kuburitswa kweiyo yekutanga vhezheni ye "openEuler 1.0" iyo yakatoburitswa pawebhusaiti yeprojekti.
Izvo zvakakosha kutaura izvozvo kusvika zvino kugovera chete inowanikwa masisitimu akavakirwamune Aarch64 zvivakwa (ARM64).
1 Nezve openEuler
1.1 Dhawunirodha uye bvunzo openEuler
openEuler inoenderana nezvakawanikwa neiyo EulerOS yekutengesa yekuparadzira, Iri bazi rebaseji reCentOS uye inonyanya kugadzirirwa kushandiswa kweserver ine ARM64 processor.
Nzira dzekuchengetedza inoshandiswa mukugovera kweEulerOS ivo vanopupurirwa nebazi rezve Ruzhinji Kuchengetedzwa kweVanhu Republic of China uye vanozivikanwawo sekusangana nezvinodiwa neCC EAL4 + (Germany), NIST CAVP (US), uye CC EAL2 + (US).
EulerOS imwe yemashanu mashandiro ekushandisa (EulerOS, macOS, Solaris, HP-UX, uye IBM AIX) uye chete kugoverwa kweLinux kunozivikanwa nekomiti yeOpengroup kutevedzera UNIX 03 standard.
Mukuzivisa kwekusununguka kubva openEuler, iro rakavhurikaEuler timu rakanyora:
“Tiri kufara zvikuru panguva ino. Zvakaoma kufungidzira kuti isu tichagadzirisa zviuru zvemakodhi zvitoro. Uye kuti uve nechokwadi chekuti dzinogona kunyorwa uye kubvumidzwa, tinoda kutenda kune vese vakatora chikamu mupiro «
Pakutanga kutarisa, mutsauko uripakati pe openEuler neCentOS wakakosha uye havana kuganhurirwa pakudzokororazve.
Somuenzaniso, openEuler inosanganisira yakashandurwa Linux kernel 4.19, systemd 243, bash 5.0, uye desktop yakavakirwa pa GNOME 3.30.
Pamwe chete nazvo akawanda maARM64 chaiwo ekugadziriswa akaunzwa, mamwe acho akatotakurwa achiendeswa kumakona epasi emakodhi eLinux, GCC, OpenJDK, uye Docker kernels.
Pakati pehunhu hweteki yekuparadzira inomira kunze kweiyo otomatiki optimization system yekugadzirisa rwiyo, uchishandisa michina yekudzidzira nzira kugadzirisa system parameter.
A-Tune, chii chiri basic system software inogona kugadziridzwa otomatiki zvinoenderana nehunyanzvi hwekugadzira huchenjeri.
Inopa zvakare rako rako rakareruka maturaki ekugadzirisa iSulad yakavharirwa midziyo. Izvi ndizvo nguva yekumhanya lcr (Lightweight Container Runtime, OCI inoenderana) zvichibva pane gRPC services. Inofananidzwa ne runc, iSulad yakanyorwa muC asi nzvimbo dzese dziri OCI inoenderana.
Muchiziviso chepamutemo chinotaura izvozvo Aya masisitimu akavakirwa paHuawei Cloud kuburikidza nescript automation.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti chirongwa ichi chiri muchikamu chekutanga chebudiriro (basa rekumisikidzwa kwaro rakaitwa kubva munaGunyana 17, 2019), sekureva kwaGitee, ine vanopfuura vanogadzira makumi mashanu.
Dhawunirodha uye bvunzo openEuler
Kune avo vanofarira kuyedza iyi Linux distro, unogona kuenda kune webhusaiti yepamutemo yeprojekti, umo muchikamu chayo chekurodha uchakwanisa kuwana iyo system ine ISO mufananidzo iri 3,2 GB.
Iyo yekuchengetera ine ingangoita 1000 yakanyorwa mapakeji yeARM64 uye x86_64 zvivakwa.
Kodhi kodhi yezvinhu zvinosanganiswa nepakeji yekuparadzira inowanikwa pane iyo Gitee sevhisi. Package fonts inowanikwawo kuburikidza neGitee (iyo yekuChina imwe kuGitHub).
aquí isu tinogona kuwana maviri akapatsanurwa masitoreti, imwe yekodhi yekodhi uye imwe yacho sosi yepakeji yekuchengetedza mapakeji esoftware ayo anobatsira kuvaka iyo inoshanda system.
Chekupedzisira, zvakakosha kutaura kuti izvozvi magwaro aripo muchiChinese chete, asi zvinonzi zvatova pabasa kuzvipa muChirungu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Huawei yakaratidza yayo nyowani Linux kugovera openEuler, zvichibva paCentOS
Nolberto Vergara chinobata mufananidzo akadaro
Ndechipi chishandiso chinoshanda ndechekuti Huawei Mate 10 Pro mushandisi ashandise iyi Dell Linux system?
Pindura Nolberto Vergara
Linus Torvalds Inoramba Linux Basa Rekugadzirisa Ine Stadia Port Nyaya